Faransiiska oo sheegay in Somali ay ka degi la’dahay burcad badeeda – SBC
Faransiiska oo sheegay in Somali ay ka degi la’dahay burcad badeeda
Dowladda Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda Soomaaliya ay ka dagi la’dahay kooxaha burcad badeeda Soomaalida islamarkaana dalka Soomaaliya ay u horseedeen saboolnimada.
Safiirka u fadhiya dalka Faransiiska Qaramada Midoobay Gerard Araud ayaa waxaa uu sheegay in dhibaatada burcad badeednimada ay ka dambeyso degnaansho la’aanta iyo dhaqaalo yarida ka jirta dalka Soomaaliya.
Mr. Araud ayaa waxaa uu intaasi ku daray in kooxaha burcad badeeda Soomaalida ay sababeen saboolnimada ka jirta dalka Soomaaliya taasi oo uu ku micneeyay inay hor istaageen kooxahaasi Maraakiibtii gar gaarka usoo siday dalka Soomaaliya.
Mas’uulkaasi ayaa waxaa uu sheegay in kooxaha burcad badeed ay ku jiraan dambiyo, waxaana uu sheegay in xaalka Soomaaliya uu ku jiro in la sameeyo nidaam looga hortagayo kooxaha burcad badeeda Soomaalida oo dhibaato ku haysa Maraakiibta shisheeye.
Golaha amaanka ee Qarmadka Midoobay ayaa asbuucaani gudahiisa waxaa uu shaaca ka qaaday in dalka Soomaaliya loo baahanyahay ina laga dhiso goobo lagu Maxkamadeeyo burcad badeeda Soomaalida iyo kuwa lagula dagaalamo si ay u yaraato dhibaatooyinka ay u gaysanayaan Maraakiibta shisheeye.
Arintaani ayaa waxaa ay ka dambeysay kadib markii Maxkamad ku taala Woqooyiga dalka Russia lagu Maxkamadeeyay 6-ruux oo burcad badeeda ah kuwaasi oo u kala dhashay wadamo kala duwan sida Russia, Estonia, Latvia iyo wadamo kale kuwaasi oo ka qowlaysanayay Badwaynta Arctic Sea.